ဆရာမြတ်ကြီး | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London | Page 2
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကဘဝတစ်ခု အပိုင်း(၂၁) ဓမ္မဓိဌာန်ကျသောအမြင်ကိုမည်သို့တည်ဆောက်စေဖြစ်ခဲ့ပါသနည်း?? စာရေးသူတို့သည် ဆရာမြတ်ကြီး၏ အဆုံးအမဖြင့် ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော အမြင်ကို ရရှိဖူးကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ဖူးသည်။ ဆရာမြတ်ကြီးသည် ဓမ္မဓိဌာန်ကျသောအမြင် ပိုင်ရှင်ကြီး ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ အမှန်အကန် အကြောင်းအချက် ဖြစ်သည်။ ဆရာကောင်းတပည့် ပန်းကောင်းပန် ဆိုသကဲ့သို့ မိမိတို့သည် ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော အမြင်ကို တည်ဆောက်လေ့ ရှိသည်။ ယခုအခါ စဉ်းစားမိသည်မှာ အဘယ့်ကြောင့် တည်ဆောက်ဖြစ်ပါသနည်း?? ဟူသော မေးခွန်းအတွက် အဖြေပင်ဖြစ်သည်။ အချို့သည် ဓမ္မဓိဌာန်ကျသောအမြင်ကို တည်ဆောက်လေ့ မရှိကြပါ။ စိတ်မကောင်းစရာ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး, အနိစ္စ	| Leaveacomment
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကဘဝတစ်ခု အပိုင်း(၁၉) စာရေးသူတို့ပညာရလာပုံ ဆရာမြတ်ကြီး၏ အဆိုအဆုံးအမအောက်၌ စာရေးသူတို့သည် ပညာရလာသည်။ ပညာရလာသည် ဆိုသည်မှာ စာရေးသူတို့၏ တစ်သီးပုဂ္ဂလအတွေးသည် အတွေးဟု သိနားလည်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ လောကသဘာဝ ဖြစ်ရပ်တို့သည် လောကသဘာဝ အကြောင်းအကျိုးညီညွှတ် တိုက်ဆိုင်သလို ဖြစ်နေကြသည်ဟု နားလည်သည်။ ထိုအခါ စာရေးသူတို့၏ တစ်သီပုဂ္ဂလ အတွေးအခေါ်သည်၊ လောကကြီး၏ ဖြစ်ရပ်နှင့် တိုက်ဆိုင်ရမည်ဟု တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်းကို နားလည်သည်။ ယင်းကား ပညာပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းပညာကို ဆရာမြတ်ကြီး၏ အဆိုအဆုံးအမ အောက်၌ရခဲ့သည်။ အချို့သည် … Continue reading →
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကဘဝတစ်ခု အပိုင်း(၁၈) တရားတိုးတက်သည်ဆိုရာဝယ် စာရေးသူတို့သည် ဆရာမြတ်ကြီး၏ အဆိုအဆုံးအမကြောင့် တရားတိုးတက်အောင် ကျင့်ကြံ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသည်။ တရားတိုးတက်သောအခါ ကြည်လင်ခြင်း၊ ပေါ့ပါးခြင်းများကို လက်တွေ့ ခံစားရသည်။ တရားမတိုးတက်လျှင် မကြည်မလင်ဖြစ်၍ မပေါ့ပါးပါ၊ လေးလံထိုင်းမှိုင်းတတ်သော သဘောရှိသည်။ ယခုအခါ စာရေးသူတို့သည် တရားရှုတတ်သည် ဖြစ်၍၊ တရားတိုးတက်မှုကိုပါ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် တတ်လာသည်။ တရားအားထုတ်သော အခါတိုင်း ကြည်လင်မှုများ၊ ပေါ့ပါးမှုများကို ရလာသည်။ စာရေးသူတို့သည် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်နေကြသည်။ ဆရာ့အဆုံးအမကြောင့် အောင်မြင်ခဲ့သော တရားရှုခြင်းဆိုင်ရာ … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး	| Leaveacomment
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကဘဝတစ်ခု အပိုင်း(၁၇) ဆရာမြတ်ကြီးအကြောင်း (အဆက်) စာရေးသူတို့သည် ဆရာမြတ်ကြီးထံတွင် ပညာသင်ယူတိုင်း၌ ထူးခြားသော အဆိုအဆုံးအမများ ရခဲ့ဖူးသည်။ ယင်းတို့မှာ – (၁) တရားရှုတယ်ဆိုတာ ဉာဏ်နဲ့ရှုရတယ်၊ စိတ်နဲ့ မရှုရဘူး။ ရှုတယ်ဆိုတာ အပျက်မြင်အောင် ကြိုးစားရတယ်။ (ရိုးရိုးငေးနေတဲ့ သဘောမဟုတ်ဘူးပေါ့) ခန္ဓာဆိုတာတော့ အရှုခံတရားပဲ ဒါပေမယ့် ရှုစရာ အဓိကအချက်ဟာ ဟဒယဖြစ်တယ်။ ဟဒယဆိုတာ ရင်ချိုင့်အောက်နားမှာ နေတယ်၊ ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါ တုန်လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ (၂) အကျင့်ကျင့်ရမယ်။ အကျင့်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး, နိဗ္ဗာန်	| Leaveacomment
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကဘဝတစ်ခု အပိုင်း(၁၆) ဆရာမြတ်ကြီးအကြောင်း (အဆက်) ဆရာမြတ်ကြီး၏ ထူးခြားသော ဂုဏ်ရည်ထဲတွင် ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော အမြင်ကို လက်တွေ့ ပီပီပြင်ပြင် ဆုံးဖြတ်တော်မူသည်ကို ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဖူးတွေ့ခဲ့ရသည်။ မိမိသည် အသိပညာ ရှာဖွေခဲ့ဖူးပါသည်။ ဆရာမြတ်ကြီးကို မတွေ့ခင်က ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော အမြင်အကြောင်းကိုမူ လက်တွေ့သွန်သင်ခြင်း မရခဲ့ချေ — ရှာဖွေသော်လည်း ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော အမြင်ကို ပီပီပြင်ပြင် မမြင်တတ်သေးချေ။ ဆရာမြတ်ကြီးကို ဖူးတွေ့ရသော အခါမှသာ ဓမ္မဓိဌာန် ကျခြင်းဆိုင်ရာ အမြင်ကို ပီပီပြင်ပြင် တတ်သိနားလည်ခဲ့သည်။ Tags: Buddhism, … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, ဆရာမြတ်ကြီး	| Leaveacomment
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကဘဝတစ်ခု အပိုင်း(၁၅) ဆရာမြတ်ကြီးအကြောင်း (အဆက်) ဆရာမြတ်ကြီးသည် မိမိဖာသာ မှန်အောင် နေလေ့ရှိတော်မူသည်။ ပြင်ပလောက၏ အထင်အမြင်များကို အကြောင်းမပြူချေ။ မိမိအမှန်နှင့်မိမိ အေးအေးဆေးဆေး သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့သည်။ မိမိသည် ကပ္ပိယအဖြစ်နှင့် (၁၀) နှစ်ဝန်းကျင် တပည့်ခံခဲ့သည်။ ဆရာမြတ်ကြီးသည် လွန်စွာအေးချမ်း၍ လွန်စွာတည်ငြိမ်သည်။ တောတောင်၊ ချောက်ကမ်းပါးနှင့် သင်္ချိုင်းကုန်းများ၌ တရားအားထုတ်တော် မူခဲ့ခြင်းကြောင့် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာများ ပြည့်စုံရရှိကာ လောကီ အကြားအမြင် ဗဟုသုတများလည်း ရသည်၊ အစွမ်းတန်ခိုးများလည်း ရသည်။ သို့သော် ဆရာမြတ်ကြီးသည် … Continue reading →
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကဘဝတစ်ခု အပိုင်း(၁၄) ဆရာမြတ်ကြီးအကြောင်း (အဆက်) ဆရာမြတ်ကြီးသည် မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်း ကျင့်သည်။ ဆရာမြတ်ကြီးသည် လောကီဝိဇ္ဇာ၊ ဇော်ဂျီ၊ တပဿီ၊ ဘိုးတော်၊ ဘွားတော် – ယင်းတို့ကို စိတ်မဝင်စားချေ။ လုံးဝ စွန့်ပယ်တော် မူခဲ့သည်။ မြတ်စွာဘုရားခိုင်းသည့် ဝိပဿနာကိုသာ ကျင့်ကြံသည်။ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အထိုက်အလျောက် ပြည့်စုံသောအခါ အာရုံများ ရတော်မူခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော် လောကီအားလုံးအား ပယ်စွန့်တော် မူခဲ့သည်။ မြတ်စွာဘုရား အကြိုက်သာလျှင် ကျင့်ကြံအားထုတ်တော် မူသည်။ ထို့ကြောင့် ဝိပဿနာအရာ၌ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်	| Leaveacomment
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကဘဝတစ်ခု အပိုင်း(၁၃) ဆရာမြတ်ကြီးအကြောင်း (အဆက်) ဆရာမြတ်ကြီးသည် စာရေးသူအား မွေးသည်။ ယခုအခါ စာရေးသူသည်၊ လူလားမြောက် လာသည်။ စာရေးသူသည် ဆရာမြတ်ကြီး သွန်သင်သဖြင့် ဝိပဿနာ ကျင့်တတ်သည်။ ကျင့်လည်းကျင့်ကြသည်၊ ထိုအခါ ကျင့်ကြံသလောက် အောင်မြင် ပေါက်မြောက်သည်။ သားကောင်းတစ်ယောက် ကျောက်ကောင်းတစ်စေ့ ဖြစ်သောအခါ ဆရာမြတ်ကြီး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးပင် ဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူသည် ကျင့်နည်းသိသကဲ့သို့ ကျင့်လည်း ကျင့်ဖြစ်ခဲ့သည်ဖြစ်ရာ ဝိပဿနာလိုင်း၌ တစ်စုံတစ်ဦး ဖြစ်လာသည်။ ဝိပဿနာကို အချို့က မကျင့်တတ်ကြချေ။ ကျင့်တတ်သည် ရှိသော်လည်း၊ … Continue reading →
Posted on July 8, 2013 by chitnge
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကဘဝတစ်ခု အပိုင်း(၁၂) ထူးခြားသောဆရာမြတ်ကြီးအကြောင်း ဆရာမြတ်ကြီး အကြောင်းကတော့ ထူးခြားချက်ပေါင်း မြောက်မြားစွာ ရှိပါတယ်။ တော်တော်ထူးခြားတာပဲ — ကျွန်တော်လည်း ဒီသာသနာကြီးကို အံ့သြတယ်။ ဒီသာသနာကြီးမှာ သူတော်ကောင်းတွေ သီတင်းသုံးတော် မူကြတယ် ဆိုတဲ့သဘောကို ကျွန်တော်လည်း သိရတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲက သားသမီးတစ်ယောက်ပါ။ တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ရင်းနဲ့ ဆရာမြတ်ကြီးအကြောင်း ကြားတာနဲ့ တပည့်ခံလိုက်တာ။ တရားရှုနည်း သင်ပေးမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ဘဝင်ကျသွားတယ်။ ဆရာမြတ်ကြီးက တရားရှုနည်းကို တကယ်သိပါတယ်။ တကယ်လည်း သင်ပါတယ်။ ရှုတယ်ဆိုတာက … Continue reading →
Posted on December 11, 2012 by chitnge
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား၌တရားအားထုတ်ခြင်း စာရေးသူတို့သည် ကျိုက္ခမီရေလယ် ဘုရားမှ အပြန်လမ်းတွင် မော်လမြိုင်ယောဂီများနှင့် တရားဘာဝနာများ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးနောက် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားသို့ဖူးရန် ကျိုက်ထိုမြို့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားသို့ တက်ရောက်ရာလမ်းတွင် တည်ရှိသော စိန်ရတနာကျောင်းတိုက်၌ ခတ္တနားသည်။ ထိုကျောင်းတိုက်ကို ၀င်ခဲ့ရန် ဗိုလ်ကက် (ဗိုလ်ချုပ်ကက်စိန်-ငြိမ်း) က မှာကြားလိုက်သည်။ ဗိုလ်ကက်၏ မျက်နှာနှင့် စိန်ရတနာကျောင်းမှာ အထူးဂရုစိုက်သည်။ ထို့နောက် မော်တော်ကားနှင့်တက်ရာ မော်တော်ကားများသည် လွန်စွာကောင်း၍ ကားမောင်းသမားများသည် လွန်စွာကျွမ်းကျင်ကြသည်။ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ဖူးရသည်မှာ လွန်စွာဝမ်းသာဖွယ်ရာ ကောင်းသည်။ တရားထိုင်ကြရာ အာရုံများလွန်စွာကောင်းသည်။ အမှန်တကယ်တော့မူ စာရေးသူကိုယ်တိုင် ဆရာမြတ်ကြီး … Continue reading →
Posted on December 1, 2012 by chitnge
ကျိုက်မရောဘုရား၌တရားအားထုတ်ခြင်း စာရေးသူတို့သည် စက်စဲမှ မုဒုံ၊ မုဒုံမှ မော်လမြိုင်၊ မော်လမြိုင်မှ ကျိုက်မရောသို့ သွားကြသည်။ “ထန်းပင် ထန်းလက် ထန်းရွက်ဝေစည် ကျိုက်မရောမြိုက သာယာလှပေသည် .. .. “ ဆိုသော စကားအတိုင်း ထန်းပင်များသည် ဝဲယာပေါက်လျှက်ရှိရာ လှပနေလေသည်။ ကျိုက်မရော ဘုရားကြီးကို ဖူးရသည်မှာ လွန်စွာကြည်နူးဖွယ် ကောင်းသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် ခြေတော်အစုံချလျှက် သီတင်းသုံးတော်မူသည့်ပုံ ဖြစ်သည်၊ ထူးဆန်းသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တွေ့ရခဲသော သဘောရှိသည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ မျက်နှာတော်မှာလည်း လွန်စွာသပ္ပာယ် ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ကောင်းသည်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး, အနိစ္စ, မြတ်စွာဘုရား	| 1 Comment
Posted on September 27, 2012 by chitnge
လောကဥသျှောင်ဘုရား၌ တရားအားထုတ်ခြင်း အနော်ရထာ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သော လောကဥသျှောင် ဘုရားသည် တရားအားထုတ်ရန် လွန်စွာ ကောင်းသည်၊ သစ်ရိပ် ၀ါးရိပ်နှင့် အေးမြသည်။ တရားတော်မြတ်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုလည်း ဦးထိပ်မှာ ပန်ဆင်သည်၊ ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး ခန္ဓာငါးပါးကို မြတ်စွာဘုရားလှူကာ၊ မြတ်စွာဘုရားကို ဦးထိပ်ထား၊ ဆရာမြတ်ကြီးကို ဦးထိပ်ထားကာ တရားရှုပါသည်။ မြတ်စွာဘုရား အမှုးပြု၍ သူတော်ကောင်းများ၊ ဆရာသမားကောင်းများကို ပူဇော်ရသည်မှာ ဤနေရာ၌ လွန်စွာ အဖိုးတန်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ စာရေးသူတို့သည် ခန္ဓာကို ရှုကြရာ အခက်အခဲများစွာ မရှိချေ။ ဟဒယကို စိုက်၍ … Continue reading →